Farmaajo oo la xiriiray Al-siisi xilli Khilaaf Imaaraadka sii xumaanayo
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiriir Khadka Taleefonka la sameeyay dhigiisa Masar Cabdifitaax Al Siisi.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in Madaxweyne Farmaajo uu ugu hambalyeeyay Al Siiisi guusha uu ka gaarey doorashadii bishan ka dhacday dalkiisa, oo mar labaad xilka loo doortay.
Si buuxda looma shaacin waxyaabaha kala ee ay kawada hadleen Farmaajo iyo dhigiisa Masar, marka laga reebo hambalyada doorashada Al Siisi.
Xiriirka uu la sameeyay Madaxweyne Farmaajo Al Siisi ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladdiisa xiriirkii kala dhaxeeyay Imaaraadka uu aad u xumaaday, islamarkaana ay labada dal qarka u saaran yihiin inay Safaaradaha kala qaataan.
Warar ayaa sheegay in Farmaajo uu ka codsaday Al Siiisi inuu sooo farageliyo Khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka, maadaama Masar ay kamid tahay dalalka xulufada Carbeed ee xiriirka u jaray Qadar June 5, 2017.
Madaxweyne Farmaajo ayaa baajiyay safar la filyay inuu bishan ku tago Qadar sababo la xiriira Khilaafkii ka taagnaa Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo markale Baaq u dirtay Jaamacadda Carabta
War Saxaafaded 24.03.2018. 11:16
Soomaaliya ayaa ka dalbatay dowladaha xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta inay...
Farmaajo oo safar deg-deg ah ugu ambabaxay Masar
Soomaliya 23.02.2019. 14:01
Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu laabtay Muqdisho
Soomaliya 10.12.2017. 11:57
Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu xiray Masar [Akhri Sababta]
Soomaliya 18.07.2018. 12:06
​Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay Masar
Soomaliya 20.08.2017. 09:33
Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay Askar uu tababaray Imaaraadka [Daawo]
Soomaliya 21.04.2018. 15:19
Farmaajo oo gaarey Masar iyo Ujeedka safarkiisa oo la shaaciyay [Sawirro]
Soomaliya 23.02.2019. 16:31